Fikarohana momba ny firaisana Ny Phobia ny hatezerana manjavozavo taloha: ny tantaram-piainan'ny Jeneraly Werner Seehofer | Helmut Krause - Fikarohana momba ny vatana teraka
Mpikaroka: Helga Ullrich, Dr. Karl Muller sy Ian Stevenson, MD
Nandritra ny Ady Lehibe I, ny Jeneraly Werner Seehofer dia miditra amin'ny afo afo
Werner Seehofer dia teraka tao Bratislava, Slovania amin'ny Auguest 14, 1868. Tamin'izany fotoana izany, i Bratislava dia anisan'ny Empira Austro-Hongroà. Rehefa lasa efa antitra i Werner, dia nanatevin-daharana ny tafika anisan'i Alemana.
Niaina tany Vienne nandritra ny fotoana maromaro izy ary nitombo tsikelikely. Tamin'ny 1902, Kolonely Werner i Werner ary voatendry ho any Linz, Aotrisy izy, izay nijanona mandra-pahatongan'ny 1907. Tamin'ny Janoary 1918 dia lasa Jeneraly izy ary voatendry ho Mpitantana ny Diviziona teo anoloana Italiana tamin'ny Ady Lehibe I.
Tamin'ny Jona 17, 1918, tsy fantatra mazava, nandao ny foiben-toerany i Werner ary nanohy nandeha izy mandrapahatonga azy ho mihoatra ny laharana voalohany. Miaramila Aostraliana maro no nampitandrina an'i Werner tsy handeha lavitra, saingy tsy niraharaha ny fiangaviany izy ireo.
Tsy mazava ny zava-nitranga taorian'izay, fa ny gazety dia nitatitra fa naratra i Werner ary lasa gadra avy amin'ny tafika Italiana. Noheverina fa maty tany amin'ny hopitaly miaramila Italiana izy taoriana kelin'ny nisamborana azy, tamin'ny taona 48. Raha tsiahivina dia nihevitra i Werner fa nanimba toe-tsaina ara-tsaina izay tsy nahasakana ny fitsarany ary nanosika azy handeha eo an-tanan'ny fahavalo italiana.
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha: i Helmut Krause dia mahatsiaro ny laharam-pahavelomana niainany tany Linz
Helmut Krause dia teraka tany Linz, Aotrisy, tamin'ny Jona 1, 1931, mikasika ny 13 taona taorian'ny nahafatesan'i Werner. Hatramin'ny taonan'ny 4 dia niteny matetika momba ny fiainany taloha i Helmut. Helga Ullrich dia naman'ny fianakaviany izay nitondra ny Helmet tao amin'ny trano fitaizana zaza kambana matetika. Indray andro dia hoy Helma tamin'i Helga:
"Fony aho lehibe dia niaina tao amin'ny 9 Manfred Street aho." (1) Nilaza koa izy fa "manamboninahitra ambony tao amin'ny Ady Lehibe" izy, izay miresaka momba ny Ady Lehibe I. (2)
I Helga dia nahazo namana, Anne Seehofer, zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Werner Seehofer, izay nipetraka tao amin'ny 9 Manfred Street, tao Linz. Nanontany an'i Anne i Helga raha manamboninahitra ambony ao amin'ny Ady Lehibe I izay niaina tamin'ny adiresiny, tao amin'ny 9 Manfred Street. Nilaza taminy i Anne fa efa niaina ny Jeneraly Werner Seehofer.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Mahatsiaro ny adiresy taloha momba ny fiainany tany Wina sy ny rafozana any Linz i Helmut
Niteny tamin'i Helga ihany koa i Helmut hoe: "Fony aho lehibe dia niaina nandritra ny taona maro tany Vienne aho." Avy eo dia nanambara tamin'i Helga ny adiresiny, niaraka tamin'ny arabe sy ny isa tany Vienne. Nomeny ihany koa i Helga izay toerana niainan'ny fiainany taloha tany Linz. Helga dia nanadihady ary nahita fa ny adiresy nomeny nomen'i Helmut dia ny adiresin'ny Jeneraly Werner Seehofer any Vienne ary ny adiresin'ny lozisielin'i Werner Seehofer ao Linz.
Fitondra-tena taloha: Helmut kely dia mitazona ny fifehezana amin'ny mpiandraikitra sy fiarahabana
Rehefa 4 taona ny fiarovan-doha dia nandeha an-tongotra tany an-tsekoly niaraka tamin'i Helga, izay nanolo-kevitra fa ny Helmet dia misakana ny volony misokatra, toy ny hafanana. Ny kitroka dia nandà tsy hihazona ny lambany, ary nilaza hoe: "Ny polisy iray dia tsy mahazo alalana amin'ny fonosana misokatra." (3) Rehefa nandalo an'i Helmut sy Helga ny miaramila dia niatrika sy niarahaba azy i Helmut.
Reincarnation & fifandraisana: Helmut mihaona amin'ny vadiny taloha
Rehefa nampidirina tao amin'ny vadin'ny vadin'i Werner Seehofer izy, dia nitebiteby be, mifanohitra amin'ny fitondrantenany mahazatra. Ian Stevenson, MD, nihevitra fa ny fihetsika tsy mitombina sy manjavozavo dia mety nanondro ny fankatoavan'i Helmet ny vadiny nanomboka tamin'ny fahazazana.
Rehefa nihalehibe izy dia nanamboatra fiaramanidina ho an'ny bisikileta mitaingina sy fanatanjahantena ny fiarovan-doha, izay manavaka an'i Werner.
Ny fiainana taloha Phobia ny hatezerana
Nanana tahotra mahery vaika i Helmut, toy ny fitifirana, izay mety ho nifandraisany tamin'ny traikefan'i Werner tamin'ny Ady Lehibe I sy ny ratra nahazo azy, izay nitarika ho amin'ny fahafatesany.
Ny tanjon'ity tranga ity dia miorina amin'ny fahaiza-manaon'i Helmut hanonona ny adiresy manokana telo mifandraika amin'ny fiainan'i Werner Seehofer, izay voaporofo fa marina. Helmut dia nanamarika ny adiresin'i Werner tao Linz, ny adiresiny manokana tany Vienne ary ny adiresin'ny Werner amin'ny lalàna ao Linz.
Helmut dia nitovy tamin'ny manamboninahitra iray tamin'ny Ady Lehibe I. Na dia tsy nisy miaramila aza ny fianakaviany. Ny rain'i Helmut dia biologista ary tsy nisy ny modely amin'ny anjara asan'ny maoderina izay mety ho nanosika ny fihetsiky ny miaramila Helmut.
Ity trangam-pinoana vaovao ity, raha manaiky, dia mampiseho ity singa manaraka ity:
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Araka ny efa nomarihan-tanana, ny Helmet dia nanamavo ny feo mahery, toy ny poa-basy, izay mety ho nifandraika tamin'ny fahafatesan'i Werner Seehofer teo anoloana Italiana tamin'ny Ady Lehibe I.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Helmet nihaona tamin'i Werner Seehofer mpitondratena, ny vadiny taloha.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 105
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 107
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 107